သားဦးရင်သွေးလေးဆုံးရှုံးထားရတဲ့ သူရဲ့ဇနီးလေးကို စိတ်ပြေလက်ပျော်ဖြစ်စေဖို့ ခရီးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ ဘုန်းလျှံ – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်ဘုန်းလျှံ ကတော့မကြာသေးမီက သူတို့ဇနီးမောင်နှံအနေနဲ့ ရရှိထားတဲ့ရင်သွေးလေးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း သူ့ရဲ့ ချစ်လှစွာသောပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့တာပါ။ ရင်သွေးလေးဆုံးရှူံးခဲ့ရတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း စိတ်ပူခဲ့ကြတဲ့ မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြတာပါ…။
ဒီနေ့မှာတော့” ကိုယ်တွေနှစ်ယောက်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်😘အခု မေလဲကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပါပြီနော်. ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမြို့အလှအပကိုစိတ်ကြည်နူးစွာခံစားနိုင်ဖို့လိုက်ပြမိပါတယ်😍😍😍”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ရင်သွေးလေးဆုံးရှူံးထားတဲ့ ဇနီးလေး စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုခင်ပွန်းကောင်းပီသစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နေကြောင်းပြောပြ လာခဲ့တာပါ…။
အဘက်ဘက်က နားလည်ဂရုစိုက်ပြုစုတတ်တဲ့ဘုန်းလျှံကိုပိူင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဇနီးချောလေးအတွက်ကတော့တကယ့်ကို အားကျစရာအိမ်ထောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါပဲနော်။ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်း ဘုန်းလျှံ တို့ဇနီးမောင်နှံအတွက်စိတ်ပူနေသူတွေရှိရင်မှတ်လျက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်…။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျဘုနျးလြှံ ကတော့မကွာသေးမီက သူတို့ဇနီးမောငျနှံအနနေဲ့ ရရှိထားတဲ့ရငျသှေးလေးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရကွောငျး သူ့ရဲ့ ခဈြလှစှာသောပရိသတျတှကေို ပွောပွခဲ့တာပါ။ ရငျသှေးလေးဆုံးရှူံးခဲ့ရတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေလညျး စိတျပူခဲ့ကွတဲ့ မှတျခကျြတှပေေးခဲ့ကွတာပါ…။
ဒီနမှေ့ာတော့” ကိုယျတှနှေဈယောကျအတှကျစိတျမကောငျးဖွဈပေးကွတဲ့သူမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျနျော😘အခု မလေဲကနျြးမာရေးကောငျးမှနျနပေါပွီနျော. ရခိုငျပွညျမွောကျဦးမွို့အလှအပကိုစိတျကွညျနူးစှာခံစားနိုငျဖို့လိုကျပွမိပါတယျ😍😍😍”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ရငျသှေးလေးဆုံးရှူံးထားတဲ့ ဇနီးလေး စိတျပွလေကျပြောကျဖွဈစမေယျ့အရာတှကေိုခငျပှနျးကောငျးပီသစှာ ပွုစုစောငျ့ရှောကျနကွေောငျးပွောပွ လာခဲ့တာပါ…။
အဘကျဘကျက နားလညျဂရုစိုကျပွုစုတတျတဲ့ဘုနျးလြှံကိုပိူငျဆိုငျထားတဲ့ ဇနီးခြောလေးအတှကျကတော့တကယျ့ကို အားကစြရာအိမျထောငျရေးကိုပိုငျဆိုငျထားတာပါပဲနျော။ပရိသတျတှထေဲမှာလညျး ဘုနျးလြှံ တို့ဇနီးမောငျနှံအတှကျစိတျပူနသေူတှရှေိရငျမှတျလကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော…။